Hallgrimskirkja any Reykjavik, Islandy
Eoropa Islandy Reykjavik
Hallgrimskirkja (Church of Hallgrimur) any Reykjavik, Islandy
Hita tao amin'ny nosy iray noforonin'ny horohoron-tany sy ny volkano, ny tanànan'i Reykjavik, kolontsaina islandey, dia trano fonenan'ny Hallgrimskirkja (fiangonana Hallgrimur), fiangonana Lutheran malaza ao Reykjavik.
Mitsangana avy eo amin'ny havoanan'i Skolavorduholt ao afovoan-tanàna ity fiangonana ity, mijoro miakatra 250 metatra ny haavony ary hita miala amin'ny roapolo kilaometatra lavitra, mitantana ny lanitra. Ny fiangonana koa dia toy ny tilikambo fandinihana izay hanomezana alalana 800 Kroner afaka mitondra fiakarana ho any ambony ianao noho ny fomba fijery tsy hay hadinoana an'i Reykjavik .
Ny rehetra dia mandeha mankany amin'ny fitandremana ny fiangonana. Ny lakolosy dia misy lakolosy enina lehibe antsoina hoe Hallgrimur, Gudrun, ary Steinunn. Ireo lakolosy ireo dia nomena anarana taorian'ny fanajana sy ny vady aman-janany. Maty ny zanany vavy.
Ny fiangonana Hallgrimskirkja dia mitondra ny anarany avy amin'ny poeta sy ny mpitondra fivavahana Hallgrimur Petursson izay fantatra amin'ny alàlan'ny asany fihirana ny fijaliana. Petursson dia angamba poeta malaza indrindra any Islandy ary nanana fiantraikany lehibe teo amin'ny fampandrosoana ara-panahy ny firenena.
Noforonin'ny mpahay maritrano State Guojon Samuelsson ary notendrena tamin'ny taona 1937, ny fiangonana dia nieritreritra fa hitovy amin'ny matematika matematika ny volkano Basalt taorian'ny nanala azy. Samuelsson koa no lehibe indrindra tao amin'ny katedralin'ny Katolika tao Reykjavik , sy ny Fiangonana Akureyri, ary nisy fiantraikany be teo amin'ny Skandinaviana Modernism. Tahaka ireo namany avy any amin'ny firenena hafa any Nordic, i Samuelsson dia naniry ny hamorona fomban-drazana ara-panjakana sy tetika mba hahatonga ny fiangonana ho toy ny ampahany amin'ny toerana islandey, miaraka amin'ireo làlana madio sy minimalista mahazatra amin'ny Modernism.
Ny atin'ny Hallgrimskirkja dia mifanohitra amin'ny ivelany. Ao anatinao dia hahita toeram-ponenana Gothique avo kokoa ianao sy ireo varavarankely ety. Raha ny marina, araka ny voalazan'i Samuelsson tamin'ny fandaharam-potoana voalohany, i Hallgrimskinkja dia niandoha ho anisan'ny kianja lehibe kokoa sy lehibe kokoa Neo-Classical, izay voahodidin'ireo fikambanana natokana ho an'ny zavakanto sy ny fianarana ambony.
Ity sary ity dia nitovy ny fitoviana tamin'ny kianja senateana tao Helsinki. Na inona na inona antony, tsy nisy na inona na inona nahatonga an'io endrika lehibe io.
Ny fanorenana ny fiangonana dia nanomboka tamin'ny 1945 ary nifarana tamin'ny 41 taona tamin'ny 1986. Indrisy anefa, i Samuelsson, izay maty tamin'ny 1950, dia tsy niaina hahita ny famitana ny asany. Na dia nikarakarana taona maro aza ny fiangonana, dia efa nampiasaina ela be talohan'izay.
Tamin'ny taona 1948, ny Crypt teo ambanin'ny choir dia natokana ho ampiasaina amin'ny toeram-pivavahana. Nanompo izany tamin'ny faha-1974, rehefa vita ilay fitifirana, niaraka tamin'ny elatra roa. Nohamasinina ilay faritra ary nifindra tany ny kongregasiona, nankafy toerana malalaka sy trano fanampiny.
Farany, tamin'ny 1986, ny Natao dia natokana ho an'ny andro faha-roanjato taonan'i Reykjavik.
Ny fiangonana koa dia mandrindra ny taova lehibe indrindra any Islandy. Nataon'i Johannes Klais, mpikarakara ny Orogoan'ny Aterineto, io fitaovana goavam-be io dia mahavariana mahatratra 45 metatra ny haavony ary mavesatra amin'ny 25 taonina tsy azo inoana. Natao sy napetraka tamin'ny 1992 sy ny tapaky ny volana jona hatramin'ny tapaky ny volana aogositra ny gaza, afaka avoaka in-telo isan-kerinandro izy io, na amin'ny ora fisakafoanana antoandro, ary koa mandritra ny fampisehoana hariva, ho fanekena an'i Ikr2000 sy i Ikr 1700.
Hallgrimskirkja dia manana karazana trivia hafa mahaliana;
Leifer Breidfjord dia nanamboatra sy nanamboatra ny varavarana lehibe mankany amin'ny fitoerana masina, ary koa ny varavarankely misy fitaratra lehibe eo amin'ny fidirana anoloana. Ny Breidfjord dia fantatra koa ho an'ny varavarankely atao hoe Robert Burns ao amin'ny St. Giles Church ao Edinburgh, Ecosse. Izy koa dia nanamboatra ny loko sy ny manodidina ny polipitra, ny solontenan'ny Trinite, X, sy P, ny grika tany am-boalohany an'i Kristy, ary koa ny Alfa sy ny Omega.
Ny fiangonana dia manana kopian'ny Gudbrandsbiblia, ny Baiboly Islandey voalohany, izay natao tamin'ny 1584 tany Holar, Islandy.
Ny paroasin'ny Hallgrimskirkja dia manodidina ny 6000 ary voatontain'ny minisitra roa ary koa diakona maromaro fanampiny ary mpiara-miasa, mazava ho azy. Ny fiangonana dia manana fiainana ara-javakanto sy kolontsaina tena feno. Misy karazana zavakanto manantona manodidina ny fiangonana, toy ny akorandriakan'ny mpikaroka islandey Karolina Larusdottir sy ny hosodoko avy amin'ny artista Danoa Stefan Viggo Pedersen.
Ny mpihira ao amin'ny fiangonana dia heverina ho anisan'ny tsara indrindra any Islandy. Niorina tamin'ny 1982, nitety an'i Islandy sy ny ankamaroan'i Eoropa izy.
Eo ivelan'ny fiangonana dia misy sarivongan'i Leif Eriksson, le Viking, izay heverina fa ny Eoropeana voalohany no nahita ny kaontinanta amerikana, ka nandresy an'i Columbus tamin'ny taonjato dimy. Ny sarivongana dia nankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'ny arivo taona tao amin'ny parlemanta voalohany tany Islande ary fanomezana avy any Etazonia.
Fivarotana any Reykjavik
Toerana lehibe 9 any Reykjavik
Ny zavatra tsara indrindra any Reykjavik, Islandy
Ny taombaovao any Reykjavik, Islandy
Zavatra tsy tokony hatao any Reykjavik
Ny fitsidihana tsara indrindra avy any Reykjavik
Ny Kromatera Mahaleotena Mahaleotena an'i Nepal
Ny tanàn-dehibe any Montreal
Grand Coulee Dam Visitor Information
Afaka Mamangy An'i Però Aho Amin'ny Tatitra Miaramila?
Ireo Zavatra Tsara Indrindra Tokony Fantatrareo Momba Ny Karazam-borona Mba Hialana Amin'ireo Indiana
Toerana tsara indrindra any Hua Hin, Thailand
Teny sy Teny mahafinaritra ho an'ny mpizaha tany amin'ny teny soedoà
Toerana tsara indrindra ho an'ny fianakaviana manana adolescents
Roma mitaiza amin'ny ankizy
Ny seranam-piaramanidina sy fiaramanidina tsara indrindra
Famaranana any amin'ny tanàna roa any 2017
St. Matthews Profile of neighborhood Louisville